Raad Raac News Online – Dekeda Boosaaso oo an ku soo xiran wax markab ah & Shir Jaraa’id ay qabteen Maamulka Bari & Wasiiro ka tirsan Puntland
Shir Jaraa’id oo ay goor dhaw qabteen Wasiiro & Maamulka gobalka Barri ee dawladda Puntland ayaa looga hadlay xaaladda xirnaanshaha dekeda magaalada Boosaaso, waxaana si gaar ah diiradda loo saaray cabashada ka soo yeeraysa qaar kamid ah ganacsatada Dekeda wax kala soo daga.
Wasiiradda Xukuumada katirsan, gaar ahaana Wasiirka Maaliyadda iyo Wasiirka Dekedaha & Amniga baddaha ayaa si adag uga hadlay wararka sheegaya xirnaanshaha dekeda.
Ganacsatada qaarkood oo hadlay saacadihii lasoo dhaafay waxay cadeeyeen in lagu soo kordhiyey lacago dheeraad ah oo ay ku dartay Shirkadda lagu wareejiyey ee P & O kana tirsan DP WORLD.
Wasiirka Dekedaha & Amniga Baddaha Siciid Maxamed Raage ayaa beeniyey in ay dawladdu xirtay dekedda, sidaas oo kalena ay xirtay DP WORLD, wuxuuna sheegay in aysan waxba ka jirin wararkaas.
” Cid xirtay Dekedda majirto , yaan laydii sheegin beenta ah P&O baa xirtay ,Dawladda xirtay , ganacsatadaa xirtay anaga idiin sheegayna ” Ayuu yiri Siciid Maxamed Raage oo ah Wasiirka DekedahaPuntland
Mr, Raage ayaa sheegay in cidda faafinaysa wararkaas ay yihiin kuwii xiray oo uu sheegay in ay yihiin ganacsatada dekeda wax kala soo daga.
Wasiirka Maaliyadda Puntland ayaa cadeeyey in aysan jirin wax lacag ah oo lagu soo rogay Doonyaha soo xiranaya & Ganacsiga ganacsatadaba, ayna muhiim tahay in xaqiiqada laga hadlo oo arrimahan wax layska weydiiyo.
“Waxaan shacabka iyo ganacsatadu u sheegayna in dekeddu sideedi u shaqeynayso , wax lagu kordhiyeyna majirto ,waxaan doonayna waxyaabaha laysla dhexmarayo in meesha laga saaro ” Ayuu yiri Wasiirka maaliyadda Puntland.